Messi oo markii lixaad noqday laacibka dunida. - BBC News Somali
Image caption Messi oo markii lixaad noqday laacibka dunida.
Image caption tabbabaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa isna ku guulaystay tababaraha ugu fiican sannadka.
Messi 'mucjisaddii kubbadda' oo hadda lagu muransanyahay
"Waxa ay ahayd sarrayn, qofna ma uusa fileyn labaatan sano, toban sano, shan sano, afar sano ka hor inaannu halkan soo istaagi doonno" ayuu Klopp.
Waan kuu ognahay, shaqadii wanaagsanayd ee qabatay adigu [Mauricio Pochettino] iyo weliba Pep. Waa inaan idin idhaahdaa Mahadsanidiin naadigaygii Liverpool' ayuu kusii daray.